निर्मला हत्या प्रकरण : निलम्बित एसपी डिल्लीराज बिष्ट ले मुख खोले ! अचम्मित पार्ने भनाइ ।पूरा हेरि सक्दो शेयर गरौ – PathivaraOnline
Home > अपराध > निर्मला हत्या प्रकरण : निलम्बित एसपी डिल्लीराज बिष्ट ले मुख खोले ! अचम्मित पार्ने भनाइ ।पूरा हेरि सक्दो शेयर गरौ
निर्मला हत्या प्रकरण : निलम्बित एसपी डिल्लीराज बिष्ट ले मुख खोले ! अचम्मित पार्ने भनाइ ।पूरा हेरि सक्दो शेयर गरौ
admin September 16, 2018 अपराध 0
म जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख हुँदा कञ्चनपुरमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ खोल्टीकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुनु आफैंमा दुःखद कुरा हो । यो एउटा गम्भीर पछि त । तर, जहाँसम्म यो घटनामा मलाई पनि मुछियो, यो अत्यन्तै दुखद छ ।
हामी साउन लागेयता जिल्लामा भइरहेका आन्दोलनको व्यवस्थापनका लागि लागेका थियौं । नगरपालिकाले गरेको कर वृद्धिको विरोधमा दैनिक नारावाजी भइरहेका थिए । टेक्पो, इरिक्सा, आदीको आन्दोलनका कारण कञ्चनपुर अस्तव्यस्त बनेको थियो । हामी आन्दोलन रोक्ने प्रयासमै लागेका थियौं ।
साउन १० गते पनि हामी नगरपालिकाका प्रमुख ज्यु (सुरेन्द्र बिष्ट)सँग छलफलमै थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्युँसग पनि छलफलमै थियौं । जतिसक्दो कर वृद्धिको आन्दोलन फिर्ता गराउने वातावरणमा लागेका थियौं । त्यहीबेला साउन १० गते भीमदत्त नगरपालिका–२ खोल्टीकी निर्मला पन्त हराएको कुरा हामीले राती १२ पछि मात्रै थाहा पायौं । त्यसबेला पनि परिवारले हराएको हुँदा हुलियाँसहित खोजतलासका लागि निवेदन दिने तयारी गरिरहेका थिए ।
दिउँसो बबिता बमको घरमा गएर निर्मलाका परिवारले खोजी गरेका रहेछन् । त्यसबेला सामान्य अवस्था नै थियो । जब रातीसम्म निर्मला नआएपछि खोजी हुन थालेको रहेछ । भोलीपल्ट निर्मलाको लास उुखुबारीमा भेटियो । त्यतिबेला स्थानीय र प्रहरीसमेत एकैसाथ खोज्दै गर्दा निर्मलाको लास भेटिएको हो । तर, निर्मलाको खोजी गर्न प्रहरीले चासो देखाएन, वास्ता गरेन भनेर पनि भनियो । तर, त्यो होइन ।
निर्मलाको घटना भएपछि प्रहरी प्रमाण नष्ट गर्न खोज्यो भन्नेसम्म पनि कुरा आयो । प्रहरीले निर्मलाको सुरुवाल धोएर निचोर्याे । त्यसले गर्दा पनि प्रमाण नष्ट भयो भनियो । यो गलत हो । एक जना महिला प्रहरीले निर्मलाको गुप्ताङ छोप्न सुरुवालमा भएको हिलो पानीमा चोपेर छोपेको मैले कञ्चनपुर छाडेपछि मात्रै थाहा पाएँ ।
रिस पोख्ने माध्यम कर वृद्धिको आन्दोलनसँगै निर्मला पन्तको आन्दोलन सुरु भयो । खासगरी ११ गते विहान निर्मलाको लासलाई ट्याक्टरमा राखेर ल्याउन लाग्दा केही व्यक्तिले मेयर सावलाई बोलाउनुपर्ने माग गर्याे । तर, कर वृद्धिको आन्दोलनका क्रममा जुन प्रकारको आन्दोलन भइरहेको थियो, त्यही बेला मेयर साव घटनास्थलमा जानु उपयुक्त थिइन । किनभने आन्दोलनका क्रममा मेयर सावविरुद्ध चर्काचर्का नारा लागेका थिए । देश छोड जस्ता नारा पनि लागेका थिए ।
त्यस्तो अवस्थामा उहाँले घटनास्थल आउनु उपयुक्त पनि थिएन । यहाँले पनि अस्पतालमा आउने र त्यसपछि निर्मलाको घरमा जाने भन्नु भएको थियो । तर, यसलाई नै उचालियो । मलाई लाग्छ, यो मुद्दा राजनीतिक रिस फेर्ने माध्यम पनि बन्यो । सकभर हामी यो केशलाई राजनीतिकरण हुन नदिने पक्षमा थियौं । निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएपछि राजनीकिरण बन्छ कि भनेर हामी सचेत थियौं । तर दुर्भाग्य, त्यस्तै भयो ।
पोष्ट मार्टम्सपछि निर्मलाको शबलाई बुझ्ने भनेर प्रदेश सांसद प्रकाश रावलसहित बसेर सहमति गरियो । त्यतिबेला १४ गते बिहान निर्मलाको शबलाई सदगद गर्ने सहमति भएको थियो । तर भोलिपल्ट त आन्दोलन नै सुरु भयो । सबै परिवार लास लगेर सदगद गर्ने भन्नमा राजी थिए । तर, भीडले दिएन । उहाँलाई नै धम्क्याइएछ ।
कुनै सम्बन्ध छैन मलाई बम दिदीबहिनीसँगको सम्बन्ध जोडेर पनि हेरियो । धरोधर्म मसँग बम परिवारसँग कुनै सम्बन्ध नै छैन । उहाँहरु र मेरो पहाडको जिल्ला सँगै हो । तर, यहाँहरुसँग पहिले मेरो चिनजान पनि थिएन । पछि मात्रै उहाँहरु मेरो जिल्लाबासी भएको थाहा पाएर एकपटक भेट भएको हो ।
तर, अहिले बम दिदिबहिनीसँगको सम्बन्धलाई जोडेर अनेक हल्ला फैलाइएको छ । किन यसरी हल्ला फैलाइयो, मलाई नै थाहा छैन । म यति भन्न सक्छु, उहाँहरुसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन । एक छैन, दुई छैन, तीन छैन चार छैन ।
अर्काे कोत पर्व निर्मलाको हत्याको प्रशंगमा अनुसन्धानका विभिन्न पाटाहरु हुन्छन् । हामी करविरुद्धको आन्दोलनमै केन्द्रित थियौं । जब निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो, सबैको ध्यान त्यतातिर मोडियो । निरनतरको आन्दोलनका कारण हामीले निर्मला पन्तको हत्याका सबै प्रमाण जुटाउनै पाएनौं । हामीलाई काम गर्नै दिइएन ।
म बढुवाको लाइनमा भएको मान्छे हो । मलाई कुनै घटनामा मुछिनु पनि थिएन र छैन । निर्मलाको घटनापछि सयौंलाई अनुसन्धानको घेरामा राखेका छौं । सयौंको कल डिटेल हेरेका छौं । सोधपुछ पनि गरिएको छ ।
अनुसन्धानका भित्री पाटाहरु पनि हुन्छन् । तर, अनुसन्धानलाई सहज बनाउनुको सट्टा आन्दोलन गरेर समस्या भयो । मैले अनुसनधान नसक्दै मलाई निलम्बन गरियो । प्रधानमन्त्री ज्युले पनि छानविन प्रक्रियालाई सहज बनाउन निलम्बन गरिएको बताउनुभएको छ ।
हामीले पहिले सत्ता कब्जा गर्ने बेला कोत पर्व भएको सुनेकै हो । कोत पर्व कसरी हुँदो रहेछ भन्ने बल्ल थाहा पाएँ मैले । यो घटनामा जसरी मलाई मुछियो, यो एउटा मेरो जागिरे जीवनको लागि कोत पर्व नै हो । मेरो आसा के हो भने अर्काे निष्पक्ष छानविन समिति बन्ने छ । त्यो समितिले सबै अनुसन्धान गर्ने छ र जस्ता निर्दाेश व्यक्तिलाई मुक्ति दिने नै छ ।
निर्मला हत्या काण्ड अब पर्दाफास , CCTV मा कैद थियो घटना
यो भन्दा लाजमर्दो खबर के हुन सक्छ र ?? भर्खरै प्रहरी जवान देखी ठुलो पोष्ट सम्मका ९ प्रहरीहरु पक्राउ
रेष्टुरेन्ट पछाडिबाट यस्तो गम्भीर अवस्थामा १६ जना पक्राउ
श्रीमान हुँदा हुदै अर्कासँग लागेका सम्झनाकाे प्रेमीले नै यस्तो विभत्स ह’त्या गरेपछि…
ज्वाइको कु, टाईबाट अ’र्धचेत छाेरी, छोरी पूजाको स्याहार गर्दै बिचरी बुढिआमा!